Fantaro i Ursula Zage, mpitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron’ny 10-16 Aprily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2019 6:24 GMT
Mandritra ny taona 2019 ary ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera, hifandimby ny Afrikana mpikatroka ara-piteny sy ireo mpanandra-teny amin'ny fitantanana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainan'izy ireo amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampiroboroboana ny fiteny afrikana. Hiresaka momba an'i Ursula Zage (@ZuZage) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity ny lahatsoratra.
Mpikaroka, mpanoratra, wikipedista ary mpiara-manorina ny Orina Mpanasoa Global Open Initiative (GOI), fikambanana iray tsy mitady tombombarotra manana tanjona hahatonga ny fahalalàna sy ny lahatahiry ho azon'ny rehetra hovakiana maimaim-poana aho. Raha mijotso ny fampiasana ny fiteny zanatany, dia mankamamy amin'ny fanavatsavàna ireo tetikasa Wikimedia mizotra mankany amin'ny sehatra fikojakojana ny fiteny izay azon'ny rehetra ahitsy ny Orina Mpanasoa GOI. Fidirana antsehatra tanterahana amin'izao fotoana izao ny fikotrehana fiteny mbola tsy misy ao amin'ny Wikipedia, ny fanitarana ny fiteny misy amin'izao fotoana izao fa miatrika fifintinana ny mpandray anjara ao aminy, ary ny fandraisana ireo mpanoratra manampahaizana manokana amin'ny fiteny eo an-toerana ho lasa volontera.
Araka ny languagescientific.com dia manodidina ny 58% amin'ny mponina ao Ghana no miteny Twi ary manodidina ny 30% izany ho an'ireo ao Cote d'Ivoire. 607 monja ny isan'ny lahatsoratra Twi ao amin'ny Wikipedia ary ny ankamaroan'ireo dia ampahany kely fotsiny ary latsaky ny 10 ny isan'ny mpisera manitsy mihoatra ny in-dimy isam-bolana.
Fikasako ny hifantoka amin'ny 1) tetikasa natao hanatsara ny votoaty Twi an-tserasera 2) ny fanamby handray ho volontera ireo mpanoratra manampahaizana manokana amin'ny fiteny Twi.
RV: Inona avy ireo tena mandrisika anao havitrika ara-nomerika amin'ny fiteninareo? Inona ny fanantenanao sy ny nofinofinao amin'ny fiteninareo?
Nobeazina tao amin'ny tontolo tsy maintsy nitenenana teny anglisy tany an-tsekoly sy tao am-pianarana aho. Noho izany dia nitombo tao anatin'ny fahaiza-mamaky sy manoratra tsara ny teny anglisy nefa zara aho raha miteny na manoratra amin'ny fitenin-janataniko. Menatra aho ary tavela amin'ireo resadresaka rehefa mihaona amin'ireo olona avy any ambanivohitro satria tena sarotra amiko ny miteny tsara ilay fiteny ifandraisako amin'izy ireo. Mihevitra aho fa azo lazaina ho mitovy amin'izany ireo tanora sy ankizy Ghaneana maro dia maro; nobeazina izahay ho “pros” amin'ny fitenenana teny anglisy na dia mametraka ao afara ny fiteny indizeny nipoiranay aza izany. Noho ny fandroson'ny teknolojia sy ny fizoran'ny zava-èdrehetra an-tserasera, dia mihevitra aho fa tena ilaina ny hananganana votoaty amin'ny fiteny ao an-toerana misy anay ary mba tsy ho tavela ireo olona izay tsy miteny sy manoratra afa-tsy amin'ny fiteny Twi.